फर्किए निर्मलाका बाबुआमा ! – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
फर्किए निर्मलाका बाबुआमा !
काठमाडौँ, २ असोज, तेह्र वर्षीया आफ्नी छोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको विभत्स हत्याको छानविन गरी दोषिमाथि कारबाहीको माग गर्दै साता अघि काठमाडौँ आएका पन्त दम्पती सोमबार कञ्चनपुर फर्किएका छन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकलाई भेट्ने, घटनाको विवरण सुनाउने र न्यायको याचना गर्ने उद्देश्यले उनीहरु काठमाडौँ आएका थिए ।
निमर्लाका बाबु यज्ञराज र आमा दुर्गादेवीले काठमाडौँ आएको दिनदेखि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने जमर्को गरे पनि सोमबार मात्रै सम्भव भएको थियो । काठमाडौँमा विशिष्टहरुसँगको भेटको चाँजोपाजो नेकपा नेतृ निरू पालले गरेकी थिइन् । तर उनीहरुले राष्ट्रपति समक्ष भेट् गर्न पाएनन् ।
घर फर्किदै गरेकी आमा दुर्गादेवीले विमानस्थलमा दुःखेसो पोखिन् ‘राष्ट्रपति पनि छोरीकी आमा हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँलाई आफ्नो व्यथा सुनाएर मन हलुका बनाउने धोको थियो, आश्वासन पनि पाएका थियौँ, तर अन्तिममा उहाँको समय छैन, १० दिनसम्म व्यस्त हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी आयो, धोको अधुरै रह्यो ।’
उनीहरुले प्रधानमन्त्रीसमक्ष केही प्रश्नहरु राखेर विदा भएका छन् । हत्या भएको ५० दिन नाघ्दा पनि अपराधी किन समातिएनन् ? सक्कली अपराधी लुकाउने उद्देश्य छैन भने शृंखलाद्ध रुपमा नक्कली अभियुक्त किन खडा गरिएको छ ? सिंगो देश एकजुट भएर आवाज उठाउँदा, सडकमा रगत बगाएर बलिदानी दिँदा पनि सरकार जवाफदेही हुँदैन भने बोल्नै नसक्ने निमुखाले न्याय कसरी पाउलान् ? जस्ता प्रश्नको उत्तर आउने आशा र आशंकामा पन्त दम्पती कञ्चनपुर फर्किएको आजको नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ ।
अब गायनमा गीतकार तथा उपन्यासकार ‘चारखोले शिशिर’
काठमाडौँमा कीर्ते गरी आर्जन, भारतको क्यासिनोमा खर्च